Umgaqo-nkqubo weKuki-iiRadiyo zeNethiwekhi
Ikhaya / Policy Cookie
Ukwenza le ndawo isebenze ngokufanelekileyo, sinokubeka iifayile ezincinci zedatha ekuthiwa ziicookies kwisixhobo sakho. Uninzi lwewebhu luyakwenza oku.
Icookie yifayile yokubhaliweyo encinci egcinwa kwiwebhusayithi kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo xa undwendwela indawo. Inika amandla iwebhusayithi ukuba ikhumbule izinto ozenzayo kunye nezinto ozikhethayo (ezinje ngokungena, ulwimi, ubungakanani befonti kunye nezinye iindlela zokubonisa) kwisithuba sexesha, ngenxa yoko awunyanzelekanga ukuba uphinde ungene kuzo nanini na ubuyela kule ndawo okanye khangela kwiphepha elinye ukuya kwelinye.
Zeziphi iicookies ezisetiweyo ngokundwendwela indawo yethu?
Iiwekhi zeeNtlalo zeNtlalo
Ke unokuthi ngokulula "Uthandane" okanye wabelane ngomxholo wethu kwizinto ezithandwa nguFacebook noTwitter sifake amaqhosha okwabelana kwindawo yethu.
Impembelelo yokuzimela ngasese kule nto izakuhluka kwi-intanethi yentlalo ibe yintanethi yentlalo kwaye iya kuxhomekeka kwizicwangciso zobungasese ozikhethile kula manxibelelwano.
Sivavanya rhoqo uyilo olutsha okanye amanqaku esiza kwindawo yethu. Senza oku ngokubonisa iinguqulelo ezahlukileyo zewebhusayithi yethu kubantu abohlukeneyo kwaye ngokungaziwayo siso indlela iindwendwe zethu zesiza eziphendula kwezi nguqulelo zahlukeneyo. Ekugqibeleni oku kuyasinceda ukuba sikunikeze iwebhusayithi ebhetele.
Iinkcukacha-manani zaBakhenkethi iiKuki
Sisebenzisa iicookies ukuqokelela ubalo lwabatyeleli olufana nokuba bangaphi abantu abatyelele iwebhusayithi yethu, loluphi uhlobo lwetekhnoloji abayisebenzisayo (umzekelo iMac okanye iiWindows ezinceda ukufumanisa ukuba indawo yethu ayisebenzi njengoko kufanelekile kubuchwephesha obuthile), kude kube nini bachitha indawo, leliphi iphepha abajonga kulo, njl. njl. Oku kusinceda ukuba siqhubeke nokuphucula iwebhusayithi yethu. Ezi nkqubo zibizwa ngokuba “zii-analytics” zikwasixelela ukuba abantu bafike njani kule ndawo (umzekelo, kwiinjini yokukhangela) nokuba bebekhe balapha na ngaphambi kokuba basincede sibeke imali eninzi ekuphuculeni iinkonzo zethu endaweni yokuthengisa.
IiKuki zokumaketha kwakhona
Ungaqaphela ukuba ngamanye amaxesha emva kokundwendwela indawo ubona amanani anyukayo eentengiso ezivela kwindawo oyindwendweleyo. Kungenxa yokuba abathengisi, kubandakanya nathi bahlawulela ezi ntengiso. Itekhnoloji yokwenza oku yenziwe ukuba yenziwe zii-cookies kwaye ngenxa yoko sinokubeka into ebizwa ngokuba yi "cookie yokumaketha kwakhona" xa undwendwele. Sisebenzisa ezi ntengiso ukubonelela ngezibonelelo ezizodwa njl.njl ukukhuthaza ukuba ubuyele kwindawo yethu. Sukuba nexhala lokuba asikwazi ukufikelela kuwe kuba yonke inkqubo ayichazwanga. Unokukhetha ukuphuma kwezi kuki nanini na.
Iimeyile zeeleta ze-imeyile
Le sayithi inikeza iincwadi zeendaba okanye iinkonzo zokubhalisa nge-imeyile kunye neekhukhi zingasetyenziselwa ukukhumbuza ukuba sele sele ubhalisiwe kwaye ukuba ubonise ezinye izaziso ezinokuthi zivumeleke kuphela kubhaliso / abasebenzisi abangabhalwanga.
Uyilawula njani ikuki?
Ungalawula kunye / okanye ucime iicookies ngendlela onqwenela ngayo - ngeenkcukacha, jonga malungacookies.org. Ungazicima zonke iicokies esele zikwikhompyuter yakho kwaye unokuseta uninzi lwebrawuza ukunqanda ukubekwa kwazo. Ukuba uyakwenza oku, nangona kunjalo, kuya kufuneka uhlengahlengise izinto ozikhethayo ngalo lonke ixesha undwendwela indawo kwaye ezinye iinkonzo kunye nokusebenza kunokungasebenzi.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga noMgaqo-nkqubo weKuki, nceda unxibelelane nathi: